Fampiharana AI hananganana ny mombamomba ny fividianana tonga lafatra sy hanomezana traikefa manokana | Martech Zone
Talata, Janoary 19, 2021 Talata, Janoary 19, 2021 Nate Burke
Ireo orinasa dia mitady hatrany fomba hanatsarana ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny asany. Ary io dia ho lasa fifantohana manan-danja kokoa fotsiny raha mbola manohy mivezivezy amin'ny toetr'andro ara-barotra sarotra sy miovaova COVID isika.
Soa ihany fa miroborobo ny ecommerce. Tsy toy ny varotra ara-batana, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fameperana areti-mifindra, ny fivarotana an-tserasera dia miakatra.
Nandritra ny vanim-potoanan'ny fety 2020, izay matetika ny fotoana fiantsenana be indrindra isan-taona, ny fivarotana an-tserasera UK dia nitombo 44.8% ary saika ny antsasaky (47.8%) ny varotra antsinjarany rehetra natao tamin'ny alàlan'ny fitaovana lavitra.
Monito ny varotra antsinjarany BRC-KPMGr
Miaraka amin'ny fiovana dizitaly maharitra eo amin'ny faravodilanitra, na farafaharatsiny izay hahita ny raharaham-barotra mampiasa fomba omnichannel mba hahazoana tombony amin'ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa, dia maro no hitady fomba handefasana izay mety tsy fanao mahazatra amin'ny orinasa nomerika vaovao, toy ny ary koa mba hampihenana ny asa lehibe kokoa.
AI dia efa manolotra vahaolana ho an'ireo teboka fanaintainana ireo. Amin'ny alàlan'ny fahafaha-manangona angon-drakitra sy ny safidiny mandeha ho azy dia misy ny fahaizana mampihena ny asan'ny fitantanan-draharaha sy ny loharanom-bola very maina, ny fitsitsiana fotoana sy vola ho an'ny orinasa ary ny famoronana traikefa mpanjifa tsara kokoa vokatr'izany.
Saingy amin'ny 2021, misy tranga hanalavitra ity dingana iray ity. Ankehitriny rehefa fantatsika ny tombotsoan'ny AI ary azontsika antoka fa eto ny mijanona, ny orinasa dia tokony hahita loza kely kokoa noho ny fomba fampidirana.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao sy angona azo ampiasaina hananganana mombamomba ny fividianana tsaratsara kokoa, ny orinasa dia afaka mampiasa ny hery AI sy ny fahaizany manararaotra azy ireo.
Fahatakarana tsara kokoa ny mpanjifanao
AI dia fantatra amin'ny fahaizany manangona angon-drakitra mba hanehoana sy haminavina ny fironana amin'ny mpanjifa sy ny tsena amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fiantsenana miantsena, ary koa ny fitaomana amin'ny tontolo mikraoba sy makro.
Ny valiny dia sary masin'ny tsenanao izay afaka manohy mampahafantatra ny fanapahan-kevitry ny orinasa. Saingy rehefa mandroso izy io, ny kalitao sy ny fampiasana ny angon-drakitra afaka manangona sy mamakafaka dia nandroso tamin'ny fihodinana.
Androany, ary mandroso, ny angona sy ny fahitana dia azo ampiasaina hamoronana fahatakarana amin'ny antsipiriany sy marina ny mpanjifa tsirairay avy fa tsy ny ampahan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny. Ohatra, amin'ny alàlan'ny fanangonana sy fanekena ny angona cookie rehefa mitsidika ny tranonkalanao ny mpanjifa, dia azonao atao ny manomboka manangana ny mombamomba azy ireo, ao anatin'izany ny tombotsoan'ny vokatra sy ny safidinao amin'ny fizahana.
Amin'ity fampahalalana ity voatahiry soa aman-tsara ao anaty rakitsoratrao, azonao atao ny manamboatra atiny rehefa mitsidika pejy iray izy ireo mba hamoronana traikefa manokana sy tsara kokoa. Ary raha nifanaraka tamin'ny politikanao ianao, dia azonao atao aza ny mampiasa an'io fampahalalana io mba hampifanarahana ny doka sy ny fifandraisana kendrena.
Ankehitriny, tsy mitovy ny fomba fijery ny etika amin'ity fanao ity. Na dia eo aza ny fepetra henjana sy ny fepetra fanarahan-dalàna dia mijanona eo am-pelatanan'ny mpanjifa ny fifehezana ny angon-drakitra. Ho an'ireo izay manaiky dia andraikitry ny mpivarotra, ary ho tombontsoany manokana, no ampiasain'izy ireo amin'ny fomba hendry.
Matetika, ny mpanjifa dia maniry ny hahatsiarovany ny safidiny amin'ny fizahana. Izy io dia manome traikefa fiantsenana mety kokoa ary mamonjy fotoana hananganana safidy sy hanivanana indray. Raha ny tena izy:
90% ny mpanjifa vonona ny hizara fampahalalana momba ny fitondran-tena manokana amin'ny marika mba hanana traikefa mora kokoa. Noho izany, ny marika iray mahavita manao an'io dia hojerena tsara kokoa, mandrisika ny famerenana mandinika ary hamerina ny fividianana.
Forrester sy RetailMeNot
Ny tsy tadiavin'izy ireo anefa dia ny fanararaotan'ireo marika ny fahalalana hazonin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo amin'ny serasera tsy misy farany sy doka miverina. Raha ny marina, ireo dia mety hanimba ny lazan'ilay marika, fa tsy hanome azy izany akory.
Saingy ny angona angoninao dia afaka manampy anao haminany izany koa. Azonao atao ny mamantatra izay karazana doka nohajain'ny mpanjifa tsirairay tsara indrindra, ary na dia ny antsipiriany momba ny fotoana namaliana azy aza, amin'ny endrika inona, amin'ny fitaovana na fantsona inona, mandra-pahoviana, ary raha tena namporisika tsindrio iray na fiovam-po.
Ity fampahalalana ity dia sarobidy amin'ny fananganana mombamomba ny mividy. Amin'izany dia afaka mamorona fanentanana mahomby kokoa ianao sy ny fanomezana arakaraka ny anomezanao ny mpanjifanao araka izay tadiaviny.
Ary na dia taloha aza, ny mombamomba ny tsirairay dia mirona amin'ny vondrona iray amin'ny fitoviana, ny fahaiza-manao automatique an'ny rafitra AI dia midika fa ny mpanjifa tsirairay dia afaka omena traikefa manokana sy manokana.
Ny valin'ny fahombiazana sy ny varotra dia miteny ho azy ireo. Ny atiny manokana dia efa nahazo tahan'ny fifamofoana bebe kokoa noho ny fomba hafa mahazatra:
Ny mailaka manokana dia mety hahatratra 55% ny fiakaran'ny tahan'ny misokatra.
91% ny mpanjifa no miantsena kokoa amin'ny marika izay manome tolotra sy tolo-kevitra mifandraika amin'izany.
Famotopotorana Pulse accenture
Ankehitriny, eritrereto fotsiny ny fahombiazan'ny asa vitantsika raha toa ka mikendry dingana lavitra kokoa isika ary mampahafantatra ny fanapaha-kevitsika amin'ny fampahalalana nangoninay tamin'ny alàlan'ny fandrosoana AI, mba hamoronana mombamomba ny mividy amin'ny antsipiriany sy marina.
Izaho manokana dia mino fa fotoana iray tsy azo adino io.
Tags: aifahaizana artifisialymividy personasCovid-19olona ecommerceForresterfotoana fialantsasatramividy personas amin'ny InternetLahatsoratra-covidmpivarotra antsinjaranyvarotra amin'ny Internet
Nate Burke dia nanangana an'i Diginius tamin'ny 2011. Izy dia mpisava lalana e-commerce voalohany ary mpandraharaha. Nanomboka ny orinasan-tserasera voalohany nataony tamin'ny taona 1997 izy ary voatendry indroa Ernst & Mpandraharaha tanora amin'ny taona. Manana BA amin'ny siansa momba ny informatika sy MBA avy amin'ny University of Alabama izy.